ဘဝမှတ်တိုင်: Shume Root Tool 2.0.4.0 - Root လုပ်တာအပြင် Pattern Lock ကျတာ၊ Recovery ဝင်တာနှင့် အသုံးတည့် Command တွေ ပါဝင်တဲ့ Tool
Shume Root Tool 2.0.4.0 - Root လုပ်တာအပြင် Pattern Lock ကျတာ၊ Recovery ဝင်တာနှင့် အသုံးတည့် Command တွေ ပါဝင်တဲ့ Tool
Shume Root Tool ဟာ ဘာတံဆိပ်မှန်းမသိ၊ ဘာနဲ့မှ Root မရတဲ့ တရုတ် Clone တွေ Root တာမှာ အတော် အဆင်ပြေပါတယ်.. ဒါ့အပြင် Pattern Lock ကျတာ၊ ဖုန်းထဲက Recovery ဝင်မရတွေကိုလည်း ဒီကောင်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်.. Flash Tool နဲ့ ADB ကို တိုက်ရိုက်ဝင်လို့ရတဲ့ စနစ်လည်းပါဝင်ပြီး ROM များစွာကိုလည်း Free ရယူပေးနိုင်ပါတယ်. ဒါ့အပြင် Sony နဲ့ HTC တွေကို တိုက်ရိုက် Unlock လုပ်နိုင်တဲ့ Special Command တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ခုထွက်လာတဲ့ ဗားရှင်းသစ် 2.0.4.0 က 6.3.2014 ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့ Update ဗားရှင်းပါ။
Credit...by Myanmar IT Helper
1 Brush added support models: Samsung I8268, Samsung s7898, Samsung i9103, Huawei P6S, Lenovo A770e, Lenovo A760, ZTE U5, ZTE N986, Cool 8270Q, ucan U1
2 optimized identification of cottage red rice phones.
3. Brush SONY phones optimized experience
4. optimized way to reconnect the device offline
5 Other details of the optimization
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/10/2014 11:11:00 am